राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावहीन बन्दै कांग्रेस, नेता भन्छन्– ‘भाइ नेकपा बन्यो’ !
‘शेरबहादुरमा म नै पार्टी हुँ भन्ने अहमता पलाउनु कांग्रेसको दुर्भाग्य’
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको र हाल संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसमा फेरि विवाद शुरू भएको छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको वकालत गर्ने तर व्यक्तिवादी चरित्र हावी बन्दै गएको आरोप खेपेको कांग्रेसमा विवाद बल्झिएको छ । महाधिवेशनको चटारोले कांग्रेसको विवाद सतहमा देखिएको छ ।
महाधिवेशनको तिथि मिति तोकिसकेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी रूपमा विभागहरू गठन गर्न थालेपछि कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षी रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
पौडेल समूहले पत्रकार सम्मेलन गरेरै महाधिवेशन प्रभावित गर्ने खेलमा देउवा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
महाधिवेशन सन्निकट भएको बेला देउवाको कार्यशैली निर्लज्ज र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम मात्र भएको पौडेलले आरोप लगाए । संस्थापन पक्ष नियुक्ति र गठनमा लाग्ने, पौडेल पक्ष त्यसको विरोधमा लागेर पार्टीभित्र कित्ता क्लियर गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।
‘महाधिवेशन भएको साढे ४ वर्षसम्म गठन हुन नसकेको विभाग अहिले आएर गठन गर्नु महाधिवेशन प्रभावित गर्ने षडयन्त्रको रूपमा पौडेल पक्षको बुझाइ छ,’ नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘चार वर्षसम्म विभाग नै गठन गर्न नसक्ने असक्षम सभापति भनेर पौडेल पक्ष महाधिवेशनमा जाला भन्ने देउवा पक्षको बुझाइ छ, कांग्रेस विवादको चुरो यही हो ।’
कोरोना संक्रमणका कारण गाउँमा संगठन विस्तारको सम्भावना नभएको तथा कुनै गतिविधि गर्ने अवस्था नरहेको बुझ्दाबुझ्दै देउवाले महाधिवेशन प्रभावित गर्नका लागि अहिले विभाग गठन गरेको पौडेल समूहको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा विभिन्न २७ विभाग रहेकोमा थप गरेर विभागको संख्या ४८ पुर्‍याइएको छ ।
देउवाले पछिल्लोपटक जेष्ठ कांग्रेस सभा गठन गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनले महाधिवेशन नगरी गठन गरिएको नेविसंघको तदर्थ समितिको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गरेका थिए । तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल दलित संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र ठाकुर समाजको ६ महिने म्याद शुक्रवार थपिएको छ ।
‘महाधिवेशनको माग गर्ने नेविसंघ कार्यकर्तालाई अश्लील गाली गर्ने, आफू चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको, तिमीहरू सक्छौ ? भनेर दम्भ र घमण्ड देखाउनेबाहेक केही काम भएन,’ पौडेलपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
विभाग गठनअघि देउवाले पौडेलसँग नाम मागेपनि नदिएपछि विवेक प्रयोग गरेर गठन गरेको देउवा पक्षको दाबी छ । ‘पौडेल अब विगतमा जस्तो ४० प्रतिशत हिस्सा लिएर चित्त बुझाउने अवस्थामा हुनुुहुन्न,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने ।
पौडेलले आफूअनुकूल हुँदा देउवाको निर्णयमा आँखा चिम्लिने गरेको र आफूलाई लाभ नहुँदा विवाद निकालेर बखेडा झिकेको देउवा पक्षको आरोप छ ।
जिल्लामा आफ्ना प्रतिस्पर्धी गोविन्दराज जोशीलाई कारवाही गर्ने अनुशासन आयोगको निर्णयमा पौडेल मौन बसेका थिए ।
कारवाही गर्दा पनि भागबण्डा गरिएको आरोप नेपाली कांग्रेसभित्र लाग्ने गरेको थियो । गत चुनावमा सभापति देउवापत्नी डा. आरजु राणालाई असहयोग गरेको भन्दै कैलालीका पुष्करनाथ ओझालाई अनुशासन आयोगले कारवाही गरेको थियो ।
देउवाइतर खेमाको सर्वसम्मत उम्मेदवार बन्ने पौडेलको दाउ
महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नेता पौडेल देउवाविरुद्ध आक्रामक देखिन थालेका छन् । पौडेलको सक्रियता र आक्रोश देउवाइतर खेमाको नेता बन्ने प्रयासको रूपमा लिएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि कमजोर भएका बेला पौडेलले १४ औं महाधिवेशनमार्फत सभापति बन्न जोडबल गरिरहेका छन् ।
नेतृत्वको अक्षमताले कांग्रेस कमजोर भएको भन्दै दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरूले महाधिवेशनमा नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । गत महाधिवेशनमा पौडेललाई अगाडि सारेका कोइराला परिवारका शेखर र शशांक नै नेतृत्वका लागि अघि सर्ने संकेत गरेका छन् । देउवाइतरका कृष्ण सिटौलादेखि, प्रकाशमान सिंह र रामशरण महतसम्मले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन् ।
पौडेल भने देउवाइतर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेतृत्वमा बाजी मार्ने योजनामा छन् । तर देउवालाई चुनौती दिन नसकेको भन्दै शेखर र शशांकले पौडेलको नाममा सहमति गर्ने सम्भावना कम बन्दै गइरहेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा सुनिएको छ ।
आन्तरिक किचलोले झन् कमजोर बन्दै कांग्रेस
राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका झन् खुम्चिँदै गएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू सफल भएका र पछिल्लोपटक कांग्रेस सरकारमा रहेको समयमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको थियो ।
आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्न सफल भएपनि सो संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनमा नै कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो ।
२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय बेहोरेपछि पार्टीभित्र गुटबन्दी शुरू भयो । पार्टी पराजयको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका केही युवाले अर्ली महाधिवेशनको कुरा गरे ।
चुनावको पराजय बिर्संदै गएपछि त्यो विषय यत्तिकै सेलायो । २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि १४ औं महाधिवेशनको मिति तय भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसमा फेरि विवाद शुरू भएको छ । अहिलेको विवाद भने महाधिवेशनकेन्द्रित भएको नेताहरूको बुझाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवादले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भएपनि कांग्रेस भित्रको विवाद नेकपाको भन्दा पृथक भएको बताउँछन् ।
‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र पनि बलियो हुनु जरुरी छ, तर महाधिवेशनको समयमा यस्ता सानातिना विवाद भइराख्छन्, कांग्रेसभित्रको विवाद नेकपाको भन्दा फरक छ,’ केन्द्रीय सदस्य लेखकले लोकान्तरसँग भने ।
विवादका विषय गौण भएपनि महाधिवेशनको माहोल बनाउन र रौनक बढाउन विरोध भइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा कांग्रेसभित्रको विवाद प्रायोजित ठान्छन् ।
‘नेकपाभित्रको विवादलाई लिएर व्यवस्था नै परिवर्तनको हल्ला चलाइएका छन्, यो बेला कांग्रेसभित्र विवाद सिर्जना गरेर कतै व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको त होइन भनेर पनि कांग्रेसले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ खतिवडाले भने ।
म नै पार्टी हुँ भन्ने देउवा अहम् कांग्रेसको दुर्भाग्य : घिमिरे
नेपाली कांग्रेसका नेता लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे सभापति शेरबहादुर देउवाले नै विधान र नियमावली मिच्न थालेपछि कांग्रेसमा समस्या शुरू भएको बताउँछन् ।
‘कुनैपनि लोकतान्त्रिक पार्टी विधान र नियमावलीअनुसार चल्छन्, कांग्रेसमा त सभापति देउवाले पदाधिकारीलाई समेत विश्वासमा नलिई आफूखुशी गर्न थाल्नुभयो । विधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले मनलाग्दी गर्नु नै कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य भयो,’ घिमिरेले भने ।
सभापति देउवाको अक्षमताका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको स्थान खुम्चिएको घिमिरेको आरोप छ ।
‘प्रतिपक्षको स्थान पनि नेकपाले लिएको छ, सरकारको कार्यशैलीको विरोध बरू नेकपा भित्रबाटै भइरहेको छ, देशमा भइरहेको अनियन्त्रित भ्रष्टाचारप्रति कांग्रेस बेखबर जस्तै भइरहेको छ,’ पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक रहेका घिमिरेले लोकान्तरसँग भने ।
नेतृत्वको अक्षमताका कारण कांग्रेस नेकपाको भाइ जस्तै भएको गुनासो सुन्न थालिएको घिमिरेले टिप्पणी गरे ।
‘विगतमा एमालेलाई भाइ कांग्रेस भनेको सुनिएको थियो, अहिले कांग्रेसको अवस्था भाइ नेकपा जस्तै बनेको छ,’ घिमिरेको विश्लेषण छ ।